Banyere Anyị - Nanchang Vision Garment Co., Ltd.
Appmụ nwoke Uwe
Mgbatị uwe elu
Uwe elu Polo
Appmụ nwanyị Uwe
Uwe elu uwe elu
Egwuregwu efe ara
Nabata na Ọhụụ
Nanchang Vision Garment Co., Ltd. emi odude ke Nanchang obodo, Jiangxi n'ógbè, China. Nanchang bụ onye ama ama maka akwa na akwa nke oge a n'ụlọ na mba ofesi, ebe enyerela 'Chinese Famous Knitwear City', 'National Textile Apparel Creative Design Pilot Park', 'Mpaghara Ọkachasị Ọkachamara maka immepụta na Mmezi Ọdịnala Omenala' na ọtụtụ aha nsọpụrụ. .
Anyị nwere ụlọ ọrụ ibe anyị na ụlọ ọrụ na-ebi akwụkwọ, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 nke ahụmịhe iji nyere ndị ahịa anyị aka iji akara aka ha, na-enye ihe mkpuchi ọdịnala, akara ngosi ntanetị, ikpo ọkụ na-ebugharị, ntinye akwụkwọ na silk na-ebi akwụkwọ.
Anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 nke ahụmịhe iji nyere ndị ahịa anyị aka ịre ahịa akara aka ha.
Ogo bụ ọdịbendị anyị, ọ dịkwa mkpa anyị. Anyị niile na-anọgidesi ike n'ụkpụrụ nke "Ahịa mbụ, àgwà Kasịnụ".
Nhazi ndi oru
Anyị nwere ndị otu ndị ọkachamara, nwere ike inyere gị aka see eserese mmetụta dịka echiche gị.
Anyị bụ ndị ọkachamara na uwe ejiri mara dị ka uwe elu, uwe elu, hoody, tankị, pant ect., Yana anyị na-enye uwe ngwa dịka okpu, akpa na nrite, sọks maka onyinye, nkwalite na oge mmemme. Ogo bụ ọdịbendị anyị, ọ dịkwa mkpa anyị. Anyị niile na-anọgidesi ike n'ụkpụrụ nke "Ahịa mbụ, àgwà Kasịnụ". Companylọ ọrụ anyị nwere ọkachamara QC otu iji hụ na ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma tupu mbufe na usoro mmepụta nwere ike ịme ezigbo mma n'oge dị mkpirikpi. Ọzọkwa anyị nwere a imewe otu nke ọkachamara, nwere ike inyere gị ise a mmetụta picture dị ka kwa gị pụrụ ichetụ n'echiche. Naanị ihe ị ga-eme bụ inye ụbụrụ ụbụrụ gị n'efu, anyị abịala imezu ya.
You chọrọ iyi uwe ahaziri iche na echiche gị? Youchọrọ ịmepụta uwe ejiji nke gị? Chọrọ ịbụ ihe pụrụ iche na nke ọhụrụ? Ọ bụrụ otu a, ịnwere ike pịa ebe aka ekpe iji nweta ya! Nabata na weebụsaịtị anyị.
Fangda Shang Shang Building, No.888, Chuangxin mbụ Road, Gaoxin Area, Qinshanhu District, Nanchang, Jiangxi, China
Nchoputa Ugbu a
Omenala Marathon Ngwaahịa na Ngwa
N'ihe banyere ọrụ ebere na ihe omume, marathons bụ otu n'ime nhọrọ kachasị akara ebe ahụ. Marathon na-enye ndị ọgba ọsọ ohere igosipụta ume ha, ikike na ntinye onwe ha na thei ...
Gịnị bụ Akwa Nchedo Anyanwụ? Wh ...
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ n'ụsọ mmiri, na-efe mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri, ọ ga-abụrịrị na ị na-eme mkpesa banyere ịmịkọta ihu na ihu igwe n'oge ọ bụla ị gbanwere. Ka emechara, ọ na-atụ aro rea ...
Gịnị bụ triblend ákwà? Kedu ihe kpatara ya ...
Gini mere uwe elu triblend t ji dị mma? Mgbe onye ahịa m na-achọ ndụmọdụ maka ịhọrọ ihe a ga-eji na-eme uwe elu mgbe niile, amaara m nke ọma ịkwado ya. Ọ bụrụ na ị jụọ m ihe kpatara ya, aga m agwa gị na a tr ...